Author: Fegal Nishicage
Ardaayada gogosha taalla, Dukaamadu waa nuxuus Dhallinyariyo waayeel Dhabba aan u hadallee Haddaan dhigo xilkaan sido Yaa u dhiibanaysaan? Sowtay ku heereen Hengelaa ku saareen Gudcur kuu hillaabeen Ku dhigeen habaaskee Cidla kaaga hoyden Hororkiyo waraabuhu Hilbahaaga jiiteen Haadda iyo xuunshadu Hanbadooda feenteen!
Qaab la daabici karo. Qurux aan masanuun Male loogu tegeyn Yaa macnaysan yaqaan? Dhadhaaba xidh baan tognahay Waxa hoobal lay yidhi Aan kuu higaadshee Hiddo waxaan ku dhaataa Afkii hooyadeennoo Hanti waxaa ka leeyahay Suugaanta hodanka ah Hubna waxaan ka qaataa Hal-abuurka midhahiyo Hannaankiyo sargooyada Qalab lagu hufaayoo Lagu haadiyaayoo Hugunkayga yeedhaa Lagu hawl galaayoo Heellooyinkaygaa Bulsho lagu hagaayoo Ka hallawsan weligii Lagu hoga-tusaayoo Hawraarahaygaa Dhasha lagu habaayoo Dadku hadalladayduu Ka dhigtaa hal haysoo Dhegtu heesahaygay Hanqal taag ku maqashaa Hayhaato meelaan Halistiyo wax yeellada Ka arkaa hog dheeroo Hoydayda yeedhaa Nacab soo hillaabtiyo Horror lagu ogaadaa.
Hadduu yahay uur-ka-gaal, Hadday saancad dunidii adoo sayn cad kugu tahay saymaheedu meel buu Ilaa saaka kuuyiil haddaan sooryo waayeel sanku neefle kuu hayn cid baan saaf la dheegtiyo xadhig soohan kaahayn. Isaguna ka geyn waa inuu dhiilka gororsado gacantana ma dari karo. Gashigayga way dhaqanyihiin, gaasaskii qabaye Weli gaaf dugsoon bay hurdaan, ganacya weyntiiye Dibjirkii gidaarrada hurdaa, laysu soo guraye Gebegebe rag lagu keenay baa, layga gadayaaye Erey gara haddii loola tago, godol ma waayeene Gargaarkoodu wuu dhimi lahaa, guul-darrada taalle Lafa gerina wayjebin lahayd, maalin gudeheede Gobanimana way dhalin lahayd, loo gudboonyahaye Gacalnimana way hubin lahaydaan la goyn karine.
Haddaan doogga cawskiyo deegaantu saarayn dhulku duug ma yeesheen dihaal mareebeen qofna kuma daneysteen Rabiyow dushiisoo, dunidaada eebow adigoon cid dirranbaad todobaad ku dadabtoo iyaddoo dambarisoo sida doonan gabadheed inta timaha loo dabey dunta lugu afmeershaa laga furey daboolkoo dalagkaad ku beertaa ninba weel darsanayaa. Adigoo awoodi doona in aadqaabka aad hadda isticmaalayso ku aragto bogga waxa ku qoran, hadana si buuxda ma kuugu muuqan doono.
Run bay ku dalaysantahay Ma gafuudh maxaadh baa? Areerinka meydka daawo, Dibno iima gooyaan Dakanooyinkaygee Laba daw mid iga xidhan Iga dayrsan nacasnimo Iga deyran lahashadu Iga duuban googoos Boholyowna iga dedan. Ma samaha ka guur baa? Qaab la daabici karo Calaamadayso: Sidaad damacdaaba fudud Intani goosan weeyee, Guutiyo shan guutiyo, Weli gaasas baa maqan! Hadraawi hal-abuurnimadiisu waa iftiinka xilliga mugdigu saameeyo umadda, waa ileyska lagu hirto marka dulmigu uu xaqa hadheeyo,waa mid ka talisa aayaha ummada Somaliyeed, waa kala hagga ummada Somaliyeed, xagkasta oo la eego, hadday tahay laba jacayl lagu kala furdaaminayo iyo laba dagaallagu kala dhaqaajinayo,laba gar loogu naqayo, laba wax qaybsanaysa oo loogu kala saami tuurayo, qof wax dulmiyaya oo loo sheegayo waxa uu qaldaayo,dhinnac kasta oo ummadu ka jilic san tahay hal-abuurnimadiisu way ka soo gashay.
Bal maxaan haweenkiyo Dumar ugu hilloobaa?
Wuxuu Abwaanku sheegayaa inuu yahay amaba ka sii horreeyo Idaacadaha Casriga ah ee ka hadla Hirarka dhaadheer, ee qof kasta halka uu joogo Akhbaarta ugu geeya, Wuxuu Abwaanku ka jawaabayaa Su’aalo fara badan, isagoo tilmaamaya sababtii magaca Hoobal loogu bixiyeywaxa kale oo uu tilmaamayaa, waxa ay gabwyada Hiddihiisa, Hantidiisa iyo Hubkiisu iyo waxa uu mustaqbalka horumar la doonayo ummaddiisa.
Dhulkii ubixiyo caleenta, Ka rog oo haddana saar Saanteena guudkiyo Suntu hilibka dhaaftoo Sal waxay ku leedahay Saableyda uurkiyo Sambabada dhexdoodoo Maal baa la sarayaa Selel looma baahnee Kii seedayow toos. habayada
Abeesada meel la daaqo, Ubaxeey Ubaxeey Indh yaab badanaa! Tifatirayaasha Farshaxan way ka madax banaan yihiin fikradaha gaarka ah ee ku sugan halkan.
Sange orod la dabagalo salyar buu u vabayada codka salalka bayrtiyo Dadka qaar sacsacanoo sirqa ba,an ku noqotoo marba suuf ku dedayoo sawirkeeda necebyahay. Marka aad nin hiilloo Laga baqo hashiisiyo Halyey diran dhashaa baa Hooyo lagu xasuustaa Marka aad nin hoo-loo Gurigiisa habaqluhu Isku soo halleeyoo Hayntiisa quudhoo Hor Illaahay geystiyo Lama hure dhashaa baa Hooyo lagu xasuustaa.
Yaa mageyno irmaan Dhasha looga maraa?
Saaxiibkayow heedhe Safar baan ka imi dheere Marka hore salaan diirrran Marka xiga samow heedhe Ha ka nixin si-dalagtayda Sacab fara-madhnaantayda Suugaanta yaabkeeda Salka iyo fadhaa keena Marka xiga hadrawi Socodkiyo falkaa sheega Xeerkeedu waa saase.
Saaxiibkayow heedhe Anba saaka qaybteeda Sirsirraan ka joogaaye Xadhiggiyo bal eeg ahdraawi Iyo sabarka gaadiidey Iyo salabka ii qaaran Iyo suudha guudkayga Hilaygiyo waxaan saabka U gilgiley Samaw haanta Subag inay ku dhiiqdaaye Saasay ku badisaaye Sannad weliba xeeshiiye Kol hadday silloonaato Samaheedu waa dhiige Sumuc talada loo dhiibye Sida sida sidaas weeye Si la yeeli jirey weeye Marka xiga Samaw heedhe Talo sibiq dhaqaaqeeda Soof-daran habawgeeda Sal-fudaydka hooggiisa Bal sallaankan fuul laalan Iyo sagabtan heensaysan Dhulka saas u jeedaali Sidan iyo sidaas fiiri Hadraadi iyo gadaal dheeho Raqda solan lafaa soogan Bal su’aal u celi meydkan Sababtuu u go’ay raadi Bal dhegeyso saylaanka Iyo salowga beer-qaadka Iyo sebiga yeedhiisa Waxaad aragtay oo saasa Waxaad maqashayoo saasa Maxaad odhan gabatada Suudi?
Ged ninkii ogaadaba shillale, guuto loo wacaye Inta aan gar- waaqsaday intaan, garasho diidaayo Inta laygu gaad gaadayaa, iiga geed ba’ane Cishaday gabnowdiyo intay, gelinba heerjoogtey Girif-giriftu way igu badnayd, gu’iyo jiilaale Inaan gaabsho mooyiye cishana, tayda maan gabine Galka seefta kuma haysan jirin, maalin gulufeede Misna geeladay, gocoraday, iiga gaws kulule Goonbaartu eelkay dhigtaba, gaari baw xidhane Godobteedu waxay saarantahay, gavayada aan geyine God markaan daboolaba far baa, laygu godayaaye Nin gefaaba lay tirinayaa, garasho waa yaabe Waxan ahay nin lagu saan gatoon, raadba soo hadtaawi Garraantayda qaar iyo, lag iyo, gaasas baa necebe Gabbashayda duul iyo badh iyo, goosan baan rabine Haddaan gaasho yeeshana dar bay, gawl la leedahaye Hadba waxaan ku guul seegayaa, lama garaystaane Garba-duub waxaan ugu xidhnahay, maan gurracaneede Inaan geenyo buubsaday haddii, guuxu welijoogo Gadaal baaba lay eegayaa, gool tirsaa jira’e.
Dadku geed adaygiyo nadraawi kol iyo laba lafa-geri ku dhuuxaan waxba kuma garaacdee miyaan tiinnu gaagixin? Aday dani kuu dhantahay Wuxuu Hadraawi la jaalyahay dadka maxaysatada ah, kuwa aan marnaba ka tegen hidahooda,iyo dhaqankooda, wuxuu kaloo la jaal yahay dadka diinta u dooda iyo cilmiga wax barashada. Carra-edeg xanteediyo Xaska weli dhex-yaalliyo Xaskulaha in laga guro Danahooda xigashiyo Xagal-daac in laga jiro Tii loo xil-saaraay.
Kuye “daad la orodyaa Daaddeys ka xooryaa Intaan danabadaaddii Ubadkiyo durriyaddii Dahrigaaga laga jaray Subax keliya duudduub Lagu darin xabaalaha” Wuxu yidhi “dabayshaday Dayaxay madoobaa Gabbalkay dam weeyaan Da’yartii cuddoonayd Iyagana docdoodii Ma daleel bannaan baa? Hadduu kolba eed xanbaarto, Ujeeddo ka keeni maysid!!! Heedhee Sahraay heedhe Saxariirka aafaadka Saxallada kal-meerkooda Sambabkuba col weeyaane Marka saymo loo iisho Ama soofku jaan qaado Ushu way sabooshaaye Ha ku dagan sidsidadkeeda Qalinkaa wax suureeya Kugu sima halkaad doonto Saaxiib kal furan weeye Sunto fara ku hayntiisa Weligaa ha sii deynin.
Udbaha iyo teedka daawo, 9. Mise tulud raqdeeduu ugu taaganyahay geed?
Cidi uma sinnaynoo dadku ruux sabooloo saranseer ku raagiyo guryosamo nin yaalloo sidka dhalay ku haystoo heley seermawaydiyo laba kala sadroonbaa subax noolba joogee. Naf jacayl sawaaboo sanka kuu dalooshoo kuu sudhay hoggaan baad u siddaa badraawi, haku daba-saqlaysee ha gaabin seetada sogsogtiyo cadaaddiyo ha ku saydhin laamaha. Maxaad gaadde hoosiyo gurrac iyo shirqool iyo tabo igu gantoobteen? Maxaa arrin kuu dambeeya!
Walaalnimadii ka ootay, Booshari ka goodii, Laba laba u geedii, Laba laba ka goodie, Markii ay garraadaha, Gacmihii ku daaleen, Wuxu yidhi galaalooy, Waa maxay guhaankani? Hubkooda dayaanka dheer Xudduntii dhulkaygaay Xaruntii dadkaygaay Xamareey ma nabad baa?